トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ukuqala kwenyanga - sisiqalo pa parlour lo msebenzi (sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe okanye open-life)
※ Ukuba sele nje baqhele ukuya njenge trend kufunelwa ushishino lonke ukukholisa
pa onendawo kuthethwa, kodwa musa uqaphele, kwi pa egumbini, kwaye, apho kuya kubakho ixesha yaye kulula umdlalo kunye naxa . Ekhuluma apho ukuze, nokuba ixesha umdlalo, ukuze uyazi, Niphumele ukuza kubamba kuyimfuneko ukuhlola izicwangciso zoshishino pa parlour. Kwakhona
Weva naliphi na ishishini, kukho into ebizwa kwakhona isicwangciso ishishini elibe pa, nayo naphi na kwi pa parlour, siya osebenza isiseko sesi sicwangciso soshishino. Kangakanani na ingeniso epheleleyo, kunye yokusebenza nesicwangciso apho nendlela nokufunyanwa, ungabona zegumbi pa abaninzi oma ngenyanga yokuqala. Yeyona isicwangciso soshishino lenyanga enye de ekupheleni kwenyanga ukususela ngenyanga yokuqala.
ukuze kuphunyezwe kangangoko kunokwenzeka kwesi sicwangciso soshishino, nathi ixesha nexesha kunye nokuqokelelwa kweziganeko, bahamba kalukhuni isigqibo. Kakade ke, ngenxa yokuba icebo, ukuze isebenze. Kunoko, ubunyani kuphela ukuba ayisebenzi na pa parlour. E
, ekuqaleni kwenyanga ka pa parlour kukuthi, olunjani yomsebenzi ukuya, ndifuna ukuba ndibone. Ukuqala lenyanga, nesendlu pa, isiphathele ishishini ngokumangalisayo balumke. Ukususela ekuqaleni kwenyanga, kuba asikwazi akhuphe intsilelo. uhlengahlengiso nail, iivenkile ngokuqhelekileyo hlengiso isikhonkwane ngexesha lo esisiseko, kuyanqaba ukuza kubona itafile data kwenza kuqhinwe kancinane.
slot Oku kukwasebenza ngokufanayo, kwiimeko ezininzi, beka 1, kuba kusenokwenzeka ukuba itafile, unalo Uchinaoshi okanye ezifana kwi ofanayo. Ukuqala kwenyanga kwaye kwi nesendlu pa, pa zombini slot, ukuthintela Desugi engalindelekanga, oko Awayokuba ngexesha uzama imali isicwangciso soshishino okanye ngaphezulu yenzuzo ezinzulu.
Ngoko ke, kuya kuba bakholisa ukuba ukuthengisa kwisixando sokwenziwa.
Kakade ke, oku akuthethi ukuba uza kuhamba njengoko umatshini Ndacinga, kukho kwakhona ityala eza kuphuma. Noko ke, naxa kunjalo, yimalini ngaphandle okanye qinisa iinzipho ngokupheleleyo, kukho kwakhona ukuze ubone ukuba ume njani. iyonke kunye Xa, pa nesendlu yembambano igesi obukhatshwa ekuqalekeni enyangeni kusenokwenzeka ukuba amancinci. Kuphela, ukukhusela isantya ishishini yesiqhelo.
apha, kukho ingongoma endifuna ingqalelo.
kuyo, ekuqaleni kwenyanga ka pa parlour yinto yokuba urhulumente ishishini eqhelekileyo evenkileni. Ngaphandle ukulungele ukubeka phaya phezulu, kodwa loo ndawo ezifana akukho ingqondo ukomeleza nokufunyanwa kude phaya. Wonke yeevenkile eziya ukudlala eqhelekileyo nail ulungelelaniso kunye nezicwangciso meko, kukho kwakhona ixesha ebonakala ngokucacileyo. Ukuqala enyangeni leyo, unako kuthiwe ixesha ilungile, esele ibonwe kakhulu ukwenzela ukuba ukwazi evenkileni. Nokuba kwi
isikhonkwane hlengahlengiso, xa zijongwe ngenyanga enye, ingakumbi ekuqaleni kwenyanga le meko, vula oko kukuthi, yenza kube lula ukuba umgwebo zezi some. Noko ke, ekubeni irhasi-iivenkile phandle akukho mahluko ngokwaneleyo, oku kubangelwa-mali kakhulu, lifikile ixesha lokuba ayikwazi kucetyiswa. Ukuqala kwenyanga, ngaphandle komdlalo omkhulu, nina bazinikeleyo ngcono ukuba agcine, nesendlu pa.
ke, ngenxa yokuba ixesha ixesha elikhulu ayikho izenzo ukuchacha, ukuba apha Khonza, mhlawumbi maxa wambi uzame ukubetha. Ukuba zifake ekuqaleni kwenyanga, ixesha umdlalo inyanga enye, zama ukuchonga ngokuqinileyo. Lifikile ixesha lokuba ayikwazi ukuba kufanelekile. Ukuqala kwenyanga, ngaphandle komdlalo omkhulu, nina bazinikeleyo ngcono ukuba agcine, nesendlu pa.
ke, ngenxa yokuba ixesha ixesha elikhulu ayikho izenzo ukuchacha, ukuba apha Khonza, mhlawumbi maxa wambi uzame ukubetha. Ukuba zifake ekuqaleni kwenyanga, ixesha umdlalo inyanga enye, zama ukuchonga ngokuqinileyo.